यस्ता छन् पुरस्कार जित्ने फोटोहरु – MySansar
यस्ता छन् पुरस्कार जित्ने फोटोहरु
Posted on July 24, 2014 July 24, 2014 by Salokya
पिजे क्लबले आयोजना गरेको फोटो प्रतियोगितामा उत्कृष्ट ठहरिएका प्रत्येक श्रेणीका फोटोहर यहाँ हेर्नुस्। हरेक श्रेणीमा पहिलोले ३० हजार, दोस्रोले २० हजार र तेस्रोले १० हजार पुरस्कार पाए।
नेचर एन्ड वाइल्ड लाइफमा तेस्रो भएको यो फोटो इलामको कन्याम चिया बगानमा सन्तोष मानन्धरले खिचेका हुन्।
नेचर एन्ड वाइल्ड लाइफमा दोस्रो भएको यो फोटो सुरेश के राईले खिचेका हुन्। यसमा चराभन्दा माथि उडेको जेट प्लेनले छाडेको धुँवा देखिन्छ।
नेचर एन्ड वाइल्ड लाइफमा पहिलो भएको यो फोटो विकास द्वारेले खिचेका हुन्। काठमाडौँको गोठाटारमा चितुवाले एक स्थानीय बासिन्दालाई आक्रमण गर्दैगर्दाको फोटो हो यो।
डेली लाइफमा पहिलो भएको यो फोटो शैलेन्द्र खरेलले खिचेका हुन्। बाँकेका होलिया गाविसमा आगोले पूरै गाउँ जलेपछि एकअर्कालाई सान्त्वना दिँदै।
डेली लाइफमा दोस्रो भएको यो फोटो नभेष चित्रकारले खिचेका हुन्। वसन्तपुर दरबार क्षेत्रमा तरकारी बेच्दै गर्दाको फोटो हो यो।
डेली लाइफमा तेस्रो भएको यो फोटो माछा मार्नलाई कुरिरहेको बेला गणेशबहादुर मगरले खिचेका हुन्।
कल्चर एन्ड टुरिजममा पहिलो भएको यो फोटो असार १५ मा धान रोप्ने बेला काभ्रेस्थलीमा खिचिएको हो। निमेशजङ्ग राईले यो फोटो खिचेका हुन्।
कल्चर एन्ड टुरिजममा दोस्रो भएको यो फोटो गोपेन राईले गुरुङ जातिको घाटु नाचको बेला खिचेका हुन्। मादलको तालमा दुई कन्या केटी राजासामु नाच्दै गरेको देखाइन्छ यो नाचमा।
कल्चर एन्ड टुरिजममा तेस्रो भएको यो फोटो छिमी दोर्जे लामाले इन्द्रजात्राको बेला श्वेत भैरवअगाडि छ्याङ्ग खान तँछाड मछाड भएको बेला खिचेका हुन्।
स्पोर्टस् विधामा पहिलो भएको यो फोटो कपिलवस्तुको धनकौलीमा कुस्ती खेल्दै गर्दा मनोज पौडेलले खिचेका हुन्।
मुस्ताङको मार्फामा खेलिरहेका बालबालिकाको यो फोटो सन्जीवकुमार मोक्तानले खिचेका हुन्। स्पोर्टस् विधामा यो फोटो दोस्रो भएको हो।
स्पोर्टस् विधामा तेस्रो भएको यो फोटो अङ्गद ढकालले खिचेका हुन्। टि२० विश्वकपमा शानदार प्रदर्शनपछि फर्कने बेला विमानस्थलमामा पारस खड्कालाई भव्य स्वागत भएको बेला यो फोटो खिचिएको हो।
नेपाल स्माइल्समा पहिलो भएको यो फोटो पाटनको लगनखेलमा महिलाले रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ तान्दै गर्दा खिचिएको हो। यो फोटो नागरिक दैनिकमा काम गर्ने दीपेश श्रेष्ठले खिचेका हुन्।
नेपाल स्माइल्समा दोस्रो भएको यो फोटो पनि नागरिक दैनिकमा नै काम गर्ने विजय गजमेरले खिचेका हुन्। यसमा मोबाइल फोन हेर्दै दुई महिला हाँस्दै गरेको देखिन्छ।
तनहुँको घाँसीकुवामा क्यामेरातिर हेरेर हाँस्दै गरेकी बालिकाको यो फोटो नेपाल स्माइल्समा तेस्रो भएको हो। फोटो भरत गुरुङले खिचेका हुन्।
न्युजमा पहिलो भएको यो फोटो हाल कान्तिपुरमा काम गरिरहेका किरण पान्डेले खिचेका हुन्। जुलाई २०१३ मा होमवर्क समयमा नबुझाएको भनी शिक्षकले कुट्दा अजय धोबीको बायाँ आँखाको देख्ने क्षमता गुमेको थियो। तिलगंगा आँखा अस्पतालका चिकित्सकहरुले निकै प्रयास गर्दा पनि उनको दृष्टि फर्काउन सकेनन्।
न्युजमा दोस्रो भएको यो फोटो नागरिक दैनिकमा काम गर्ने विजय राईले खिचेका हुन्। सिनामङ्गलको सुकुम्बासी बस्तीमा आगलागी हुँदा भारतको आन्ध्र प्रदेशबाट आएकाहरुको बिचल्ली यसमा देखिन्छ।
न्युजमा तेस्रो भएको यो फोटो रोयटर्समा काम गर्ने नभेष चित्रकारले खिचेका हुन्। काठमाडौँमा दोस्रो संविधान सभाको चुनाव बहिस्कार गर्ने वैद्य माओवादी लगायतको समूहले गुडिरहेको सार्वजनिक गाडीमा पेट्रोल बम हान्दा घाइते भएका व्यक्तिको उपचार हुँदै गर्दाको फोटो हो यो।
तपाईँलाई कुन फोटो सबैभन्दा मन पर्‍यो ? तल कमेन्टमा लेख्नुस्।
12 thoughts on “यस्ता छन् पुरस्कार जित्ने फोटोहरु”
सबै फोटोले बोकेको कथा-व्यथा इन्दिभिजुअल फिल गर्ने कुरा हुन्.. न कि स्टोरी पढेर हुदै होइन I तस्बिर हेरेर, रंग बुझेर, समय, काल, अवस्था, एङ्गल आदि बुझेर छुट्याउनु पर्यो, तस्बिर बोल्नु पर्यो I सबै फोटो हेरेर पनि, पुरस्कृत भएको थाहा पाएर पनि २-४ ओटामा चित्त नबुझेको भन्न चाहन्छु है I
सबै फोटोहरु निकै राम्रा र उत्क्रिस्ट छन्. तरपनि, समयमा होम्वोर्क नबुझाएको भनि शिक्षकले कुटेर आँखा नै गुमाउनु परेको फोटोले मन नै फाटेर आयो. यस्तो त् छ हाम्रो शिक्षा पद्दती. पढेर ठुलो मान्छे हुनभनि बिहान घरबाट स्कुल गएको छोरा बेलुका शिक्षकको कुटाईबाट आँखा नै गुमायर घर आउदा बाबु-आमाको मन के भयो होला?
अनि त्यो कोमल मानसपटलमा शिक्षा र शिक्षक प्रति कस्तो छाप पर्यो होला?
अर्को मनै छुने फोटो बिजय गजमेर जी को छ. जुन व्यक्ति मोटरसाईकल र भैसी नपाउदा आफ्नै श्रीमती जलाउन अगाडी सर्छ भने त्यो मान्छे ले समाज र अरुको लागि के गर्ला? सारै दर्दनाक स्थितिहरुको ब्याख्या गरेका छन् फोटोहरुले. हजारौ सब्दमा व्याख्या गर्नु भन्दा यौटा फोटो हेर्दा धेरै बुझिन्छ भनेको त्यसैले गर्दा होला.
अब बरु यस्तै फोटोहरुको संगालोमा यौटा क्यालेन्डर बनाउने (हरेक बर्ष) प्रयास माइसंसार ले गर्दा कसो होला? जनचेतना पनि हुने अनि उत्क्रिस्ट फोटोहरुको सम्मान पनि हुने !!
अरु भनेको तेस्तै हो, त्यो Petrol Bomb वाला फोटो चै बैद्य लाई देखाउनु पर्ने हो, सबै नेताहरु संगै भएको बेला संभिधानसभा हाल भित्र प्रोजेक्टर लगाएर देखाउनु पाए झनै राम्रो हुने थियो, अझ मिल्यो भने त तेता पनि आगो लगाउदा खासै फरक पर्दैन होला.
चितुवा ले मान्छे लै आक्रमण गरि रहदा मान्छे लाई बचाउन तिर लाग्ने कि आक्रमण गर्दा को photo khichna तिर लाग्ने??? तेही camera man लाई आक्रमण भाको bha k गर्ने recha कुन्नि!!!
ल ठिक छ , यहा छेउ सहि मुल्यांकन भए झैँ लाग्यो |
कुरा बुझियो , श्याम स्वेत फोटो प्रथम हुने रैछ.
फोटो लाई भन्दा पनि स्टोरी लाई बादी महत्तो दिदो रहिछ !!
काठमाडौंको गोठाटार मा स्थानिय बासी लाई चितुवा ले आक्रमण गर्दा गर्दै को बिकाश द्वारे ले खिचेको फोटो बडो आकर्षक छ, निर्णायक ज्यु हरु ले सहि निर्णय गर्नु भएको मा बडो खु:सि लाग्यो!!!
डेली लाईफमा प्रथम भएको फोटो यो सेक्शन मा कसरी पर्यो मलाई त अचम्म लाग्यो एक अर्का लै सान्तोना दिनु पनि दैनिक जीवन मा पर्छ र एस्तो सान्तोना दिनु त कैले कहिँ मात्रै पर्छ नि हैन र कि लास्ट येअर को बिजेता लाई बिजेता बनाउन यो निर्णय गरिएको जस्तो लग्यो त्यो भन्दा दोस्रो र तेस्रो हुने धेरै राम्रो छ
फोटो स्टोरी कहिले आउछ?
विजयी फोटो स्टोरी यहाँ छ http://www.mysansar.com/2014/07/13912/ दोस्रो, तेस्रो र अनरेबल मेन्सन फोटो स्टोरी बिस्तारै राख्दै जाउँला।